Ribbon Shredder: Ribbon Splitter, Aaladaha Ribbon Curler ee Duubista Hadyada
Wax dheeri ah baro >>
Ka dhig xargahaaga iyo qaansooyinkaaga inay wareegaan & soo boodo! Isku-laabashada iyo jeexjeexid hal-jiid oo fudud!
Adigoo isticmaalaya qalab-laabashada ribbon jeexjeexyada jeexjeexyada,
waxaad samayn kartaa qaansooyin kala duwan oo loogu talagalay qurxinta oo waxaad ka dhigi kartaa hadiyado gaar ah.
Samee Saamaynta Khaaska ah ee Duubistaada / Hadiyadaha leh RSPAC ™ Ribbon Shredder!!!
RSPAC™ Qalabka jeexjeexa ribbon waa kan ugu dhammaystiran oo lagu kalsoon yahay duub iyo xirmo xirmo suuqa ku jirta.
Aalad Yaryar, Madadaalo Weyn
Qalabka ku habboon ee caqliga leh, waxay kaa caawin kartaa inaad kala qaybiso oo aad laalaabto xargahaaga quruxda badan si fudud u jiid. Si aad ugu darto walxo qurxin dheeraad ah baakadahaaga DIY oo aad hadiyadahaaga ka dhigto mid muuqda.
Qaababka kala duwan & Midabada
Laga heli karo hal dhinac, labada dhinac, oo leh ilko bir ah ama ilig caag ah oo wadarta guud ah 4 qaabab kala duwan si aad u buuxiso shuruudahaaga, iyo ugu yaraan 4 midabyo kala duwan oo naqshad kasta.
Noocyo Cusub Oo Imanaya Dhawaan
2 Moodooyinka cusub ayaa weli ku socda horumarinta iyo wax ka beddelka, la heli doono dhawaan. Sidoo kale, Waxaan sii wadi doonaa horumarinta qalabka ribbon ee qalabka yar yar, ku soo DHAWOOW nala soo xiriir.
Waxaan U Go'nay Isticmaalayaashayada & Alaabta
Si fudud u dhig, waxaan ku baranaa samaynta RSPAC™ Ribbon Shredder, agabka wax duubista hadyada ee ugu dhamaystiran uguna kalsoon ee suuqa.
Wkoofiyaddu waa ribbon shredder?
Ribbon shredder, sidoo kale loogu yeero Marooji xarig,xadhig gooya,ribbon mini qalab goyn,ribbon mini mishiinka goynta, ama Kala jeexjeexayaasha.
Waa qalab isku-laabashada iyo jeexjeexa ribbon oo ka samaysan balaastiig isla markaana leh saf bac ah ama ilig bir ah oo shaabadaysan oo lambar iyo dherer ku habboon ku rakiban daanka sare ee qalabka..
Waxaa jira dhowr nooc oo ah shredder ribbon ee qurxinta suuqa，sida: Maroojiye qoyan oo ilko bir ah leh,ribbon shredder iyo curler,jeexjeexa ribbon leh ilko caag ah,shredder ribbon dhinac kasta iyo qalabka laalaabida,jeexjeex,gooyaha xaashida shredder,qalab curler shredder ribbon,iwm.
Iyo daanka hoose ee qalabka leh dalool si ay u aqbalaan haynta guga.
Qalab gacanta lagu shaqeeyo si meesha looga saaro shaqada caajiska badan iyo wakhtiga loo baahan yahay in la gooyo oo la laalaado ribbon maqas si ay u noqoto mid la isku qurxiyo,iyadoo lagu cadaadiyo daanka sare iyo kan hoose, ka dibna si fudud u jiid ribbonka iyada oo loo marayo qalabka.
Waxa loogu talagalay in lagu kala gooyo shayga ribbon ee ballaca koowaad ah oo loo kala qaybiyo tiro badan oo xariijimo fidsan oo ballac yar ka kooban,dabadeed laalaab si aad u qurxiso. sida baakadaha hadiyadaha lagu duubo iyo alaabta, halkaas oo xadhig xadhig ah lagu samayn karo qurxin badan isticmaalkeeda.
Faahfaahin Dheeraad ah baro>>
Aalad La Yaab Leh Ribbon Shredder UK Video Full HD 1080p | Lacag bixinta soo socota ee saamiyada Honstar Gift Wrapping Co., Ltd.
Aaladaha Cajiibka Ah Ayaa Caawinaya In La Abuuro Hadyado Gaar Ah & Yaab
Xajmi yar iyo miisaan fudud si fudud u qabsigaaga iyo isticmaalkaaga
Cajiib “ilkaha” ee shredder hal jiidid fudud
Si aad ugu qurxiso hadiyadda kirismaska ​​ee korka leh curling gaar ah iyo saamaynta ribbon
Si aad u samayso shreds dambiisha ukunta Easter-ka ama hadiyado kasta oo kale
U kala qaybso xargaha buufin ee dhalashada ama xafladda arooska
Waxaan suuqa ku bixinaa jeexjeexyada ribbon ee ugu dhameystiran oo lagu kalsoon yahay
Dhamaaday 70,000 Isticmaalayaasha, Aan aragno waxa ay qaarkood dhahaan?
Waxaan jecelnahay isticmaalayaashayada waxaana si buuxda uga go'an in aan ilaalino kalsoonidooda
oo bixiya alaabo cajiib ah iyo taageero iib ka dib oo heer sare ah!
Cajiib!!!!!!!!!!!!!!Ilaa hadda shredder ugu fiican ee aan abid isticmaalo. aad u talin. Ma ka baqi doontid jajabinta markaad sameyso duubistaada mar dambe.
Aad ayaan ugu qanacsanahay waxqabadka badeecada iyo dhoofinta degdega ah! Waxaan xaqiiqdii ku talinayaa badeecada iyo baayacmushtarka.
Si fiican u shaqeeya. Kaliya raac talada faallooyinka kale iyo …Si fiican u shaqeeya. Kaliya raac talada faallooyinka kale oo dhig “ilkaha” ee shredder oo ku yaal dusha sare ee ribbon.
RSPAC Ribbon Shredder waa Xirmooyinka Duubista Hadyada ugu Caansan iyo Xirmooyinka Shred! Anaga ayaa ah Warshadii!!
La imow astaamo cajiib ah, premium "ilko" jiid, midabyo dhalaalaya, Noocyo kala duwan oo ikhtiyaari ah & ka badan!